» रामकुमारी झाक्रीले मन्चमै लगाएको कपडा खोल्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लाई दिइन यस्तो चुनौती ! हेर्नुहोस भिडियो रामकुमारी झाक्रीले मन्चमै लगाएको कपडा खोल्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लाई दिइन यस्तो चुनौती ! हेर्नुहोस भिडियो – हाम्रो खबर
रामकुमारी झाक्रीले मन्चमै लगाएको कपडा खोल्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लाई दिइन यस्तो चुनौती ! हेर्नुहोस भिडियो
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा प्रचण्ड–माधव समूहले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आमसभामा नेतृ झाँक्रीले राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय संस्था आफूहरुको बलिदानीले प्राप्त भएको र त्यस संस्थाविरुद्ध बोल्ने दुस्साहस आफूले नगरेको बताइन्।
‘कुनै व्यक्ति निर्वाचनको प्रक्रियाबाट त्यो संस्थामा गएर निरंकुशताको साक्षी बस्छ, एउटा प्यादा बन्छ भने त्यस्ता पात्रविरुद्ध बोल्न पाइन्छ’ उनले भनिन्, ‘एउटा खलपात्रविरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ महिला अस्मिता मिचियो भनेर ?’‘महिला अस्मिता त त्यतिबेला बलात्कृत भएको छ, जतिबेला निर्मला पन्त, भागरथी भट्ट जस्ता किशोरीहरु बला*त्कृत भएका छन्, उनीहरुको ह*त्या भएको छ’ उनले अघि भनिन् ।
लाहुरे र स्मितालाई छुटाउन ईन्डियन मिडिया सक्रिय,चरित्र हत्या गर्न खोजेपछि लाइभ आए सन्तोष ! (हेर्नुस् भिडियो)
युना गुरुङ ४ बर्षकी भईन । युनाको बुवा इन्डियन आर्मी हुन् । झट्ट हेर्दा सिनेमाको हिरो जस्तै देखिने यिनै हुन् उनै युनाको बुवा राहुल गुरुङ । बितेको १ महिना देखि युनालाई खेलाउने र भुलाउने उनको दैनिकी जस्तै हो । किन भने युनाले आमाको काख न पाएको १ महिना भैसक्यो । राहुलको हजुरबुवा इन्डियन आर्मी थिए । हजुरबुवाले काकरभिट्टा पारि भारतको बागडोगरामा घर बनाए |
बिवाह पछि उनले बुवाआमा भएको ठाउँ गोर्खाको पालुंगटारमा लिएर आए । उनले स्मितालाइ नेपालमै ल्याएर राखे । स्मिता र राहुलबाट एउटा छोरी युना जन्मिन । यति राम्री युनालाई लिएर स्मिता आबुखैरीनिमा लिएर बस्न थालिन । राहुलले स्मितालाई एकदमै खुसीका साथ राखेका थिए । तर अचानक खै के भयो राहुल एक्ला भएका थिए।
नेपाल छुट्टीमा आएको बेलामा पनि उनले श्रीमती स्मितालाइ सबैभन्दा महँगो मोबाइल किनिदिए । श्रीमतीले भने अनुसार नै उनकै रोजाईमा महँगो मोबाइल किनेकी थिइन । श्रीमानले मैले अहिले पनि स्मिताले यस्तो किन गरिन भन्ने बिश्वास नै नलागेको बताएका थिए। मैले एकदमै माया गर्छु खै कसरि यस्तो गरिन मलाई बिश्वास नै नलगाएको बताएका थिए।
मिडियासंगको कुराकानीमा उनले स्मिताले भने अनुसारको सबै पुर्याएर दिएको थिए, बुवाआमाले पनि एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो । यहाँ काम पनि केहि थिएन काम भनेको छोरीलाइ हेर्ने मात्रै थियो । हिड्ने दिन पनि उनले राम्रो संग हाँसी खुसि कुरा गरेर बिदा भएको बताएका थिए ।
पल्टनमा हुँदा यता नेपालको कुरा केहि थाहा पाएन मलाई उनि प्रति केहि संका पनि थिएन । उनले श्रीमती अर्कै केटासंग गएको बताएका थिए । मोबाइलको कल डिटेल चेक गर्दा १९६ पटक फोन गरेको उनले भेटाए । श्रीमतीले उक्त केटालाई यति धेरै पटक कल गर्दा केटाले भने १८ पटक कल ब्याक गरेको बताएका थिए ।
नानि सानै छ नानीले बुझ्दैन, नानीले सधै आमा खोज्छिन हामीले सम्झाउन सकेको छैन भन्थे लाहुरे । उनि यसरि किन गईन थाहा छैन भन्दै खोजिदिन आग्रह गरेका थिए तर उनकी श्रीमती गौसालाबाट एकजना परपुरुस संग रंगेहात फेला परेकि थिइन ।फेला मात्रै हैन अन्तत अब राहुल र स्मिता सगै नबस्ने र डिभोर्स दिने निर्णयमा पुगिसकेका थिए ।तर डिभोर्स नभई अन्तत पुनर्मिलनले आफ्नो स्थान पाएपछि लाहुरे र स्मिता पुर्ण पति पत्नि भएका छन् ।
लाहुरे र स्मितालाई छुटाउन ईन्डियन मिडिया सक्रिय,चरित्र हत्या गर्न खोजेपछि हेर्नुस् सन्तोष देउजा आए यसरी लाईभ :